Dhageyso: Afar ruux Jawaasiis oo lagu dilay degmada Ceel Cadde ee gobolka Gedo.
Diiradda Jimcaha: Mas'uul Ka tirsan Al-Shabaab oo dhul laga Xukumay (Dhageyso). Sidee Maxkamada shareecada Islaamka ee Banaadir ay ku kala xukuntay dhul muddo la isku heystay oo ku yaalla degmada Dayniile? [dhageyso]. Weerar Doon looga qabsaday ciidamada dowladda oo ka dhacay Badda gunteeda. Mareykanka oo soo farageliyay xiisadda Boosaaso iyo 'Puntland' oo howlgal iclaamisay. 'Q.Midoobay' oo ka digtay in ay kala furfurmaan qowmiyadaha dega dalka Itoobiya. Cumar Cabdirashiid oo sheegay in boob lagu hayo doorashooyinka Soomaaliya. Weeraro culus oo lagu qaaday saldhigyo kuyaal Beledweyne iyo Buula Burde. Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan iyo kuwa Iiraan oo dagaallamay. Maxkamada Raddul Madaalim oo xukun kasoo saartay dhul lagu muransanaa oo ku yaalla degmada Hodon ee Muqdisho. Kooxda TPLF oo laga qabsaday magaalada Lalibela iyo Warar kale. Sedax Xidigle katirsanaa ciidanka DF oo lagu dilay degmada Wardhiigleey. Dagaal laga cabsi qabo in uu ka bilaawdo Boosaaso iyo Deni oo hanjabaad jeediyay.
Monday March 15, 2021 - 10:05:14
Markale maxkamad islaami ah oo kutaal Koofurta Soomaaliya ayaa xukunno dilal ah ku ridday dad lagu helay falal basaasnimo ah.
Shalay gelinkii dambe fagaare kuyaal degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo waxaa lagu dilay illaa Afar ruux oo ku eedaysnaa in ay ahaayeen jawaasiis ushaqeynayay sirdoonno caalami ah.
Qaadiga maxkamadda ayaa goob fagaare ah ka sheegay in afarta ruux ee ladilay ay qirteen waxa lagusoo eedeeyay ayna qaarkood mas'uul ka ahaayeen duqeymo iyo dilal ka dhacay gobollada Jubbooyinka iyo Baay.
Ragga ladilay ayaa kala ahaa Axmed Cali dhuxul oo 50 sana jir ahaa ayaa ku eedaysnaa in uu basaas u ahaa Bangaraafta Mareykanka,
Cali Cumar Axmed oo 42 sana jir ahaa ayaa ku eedaysnaa in uu la shaqeynayay Nabad sugidda dowladda Federaalka ee ku sugan magaalada Marka.
Aadan Duuble Xasan 00 59 sana jir ah ayaa ubasaasayay sirdoonka dowladda Kenya lagasoo bilaabo sanaddii 2013 isagoona falal basaasnimo ka fuliyay Jubbada dhexe gaar ahaan Saakoow.
Ibraahim Cimraan oo ku magac dheeraa Hooroow ayaa ushaqeynayay sirdoonka dowladda Xabashida Itoobiya isagoona qaabilsanaa qeybta macluumaad aruurinta ee gobolka Baay.
Bishii Rajeb ee lasoo dhaafay ayaa magaalooyinka Jilib, Bu'aale iyo Ceel Cadde lagu dilay illaa 14 ruux oo dhammaantood ku eedaysnaa in ay jawaasiis ahaayeen ayna hagayeen diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan.
Halkan ka degso qaadiga oo xukunka ridaya MP3
Sidee Maxkamada shareecada Islaamka ee Banaadir ay ku kala xukuntay dhul muddo la isku heystay oo ku yaalla degmada Dayniile? [dhageyso].
Cumar Cabdirashiid oo sheegay in boob lagu hayo doorashooyinka Soomaaliya.
Weeraro culus oo lagu qaaday saldhigyo kuyaal Beledweyne iyo Buula Burde.
Maxkamada Raddul Madaalim oo xukun kasoo saartay dhul lagu muransanaa oo ku yaalla degmada Hodon ee Muqdisho.
Sedax Xidigle katirsanaa ciidanka DF oo lagu dilay degmada Wardhiigleey.
Al Shabaab iyo DF-ka oo siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii lagu khaarijiyey C/Casiis Africa.
Sheekh Abuu Zubeyr
Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi
Copyright © 2021 SOMALIMEMO All Rights Reserved.